December 15, 2019 Farah Abdikadir Mohamed 0
GAROWE(P-TIMES)- Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyada Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo hadal ka jeediyay Munaasabadda Daah-furka Qorshe-hawleedka Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa sheegay in Wasaaraddiisu waddo Qorshe lagu kala astaynayo dhammaan Soohdimaha degmooyinka, taasi oo tiir muhiima u ah hirgelinta Nidaamka Xisbiyada badan ee Puntland.
Wasiirka ayaa sheegay in Wasaaraddu diyaarinayso Daraasad ku saabsan Hannaanka kala xadeynta degmooyinka Puntland, waxaana uu xusay in hawshaasi loo xil-saaray Sharci-yaqaan ku xeel-dheer Arrimaha Xuduudaha si qaab cilmiyaysan loo maro Nidaamka kala Xadeynta degmooyinka oo door muhiima ka qaadanaya in doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo Puntland.
Mudane Dhabancad ayaa sidoo kale tilmaamay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ay diyaarinayso Khariirad ama Map aan ahayn Khariiradda Soomaaliya, balse sida uu sheegay u gaar ah dowladda Puntland si loo jaan-gooyo goobaha cod-bixinta degmooyinka.
DAAWO-Shacabka Garoowe oo ka cabanaya sicir barar iyo wasaarado shaqadii gabay fariina u diray madaxweynaha Puntland.
DAAWO-Boqor Burhaan oo gaarey Burtinle berrina la balansan Islaan Bashiir & xogta safarka waftigiisa.
DAWO-Tabashada beelaha gobolka Bari & sad bursiga kuraasta barlamaanka heer federal ee Puntland.
DAAWO-Banaanbax ka dhan ah mas’uuliyiin Puntland katirsan oo Qardho ka dhacay kadib khilaaf lacag ka dhashay
Farmaajo oo sheegay inuusan aqoon halka lagu dooranayo xildhibaanada SSC, Puntland mise Xamar & xildhibaan reer Sanaag ah oo caro ugu jawaabey
DAAWO-Cabdiweli Gaas,”Doorashada Somalia waxaa faraha kula jira wadamo Carbeed oo dad gaar ah wata”.
Maraykanka oo durba heshiis cusub ka saxiixday Ra’iisul wasaare Rooble
DAAWO-Sidee shacabka kunool Muqdisho uga falceliyeen go’aankii barlamaanka & inaysan mudo kordhin samayn
DAAWO-Jihaad laga dhawaaqay gobolka Gedo, haweenka oo hubka gurtay, isgaarsiintii oo la jaray & ciidanka Gorgor oo ku biiray.
Ra’iisul wasaare Rooble oo xilka la wareegey & Villa Somalia oo ka guulaysatey Khayre.
Dagaal laysu adeegsadey hubka culus oo ka qarxay furimaha gobolka lagu muransan yahay.
Jubbaland oo ka hadashay dhibka Kenya ka waddo Ceel-waaq & wasiir Janan oo ku wajahan hanjabaadna u diray ciidanka Kenya.